I-Kobo Aura H2O Edition 2 okanye ukhuphiswano olukhulu lwe-Amazon Kindle | Iindaba zeGajethi
I-Kobo Aura H2O Edition 2 okanye ukhuphiswano olukhulu lweAmazon Kindle
IiVillamandos | | eReaders, Reviews
Ngaphandle kwento yokuba iAmazon ayiboneleli ngamanani athile okuthengisa kwezixhobo ezahlukeneyo ezithengiswayo kwintengiso, kubandakanya ingqokelela elungileyo yeeReaders, akukho namnye okanye phantse akukho mntu uthandabuzayo ukuba Uhlobo lwazo zizixhobo ezithengisa kakhulu kolu hlobo Umhlaba wentengiso. Nangona kunjalo, kumaxesha akutshanje uKobo uyaqhubeka nokwenza iinzame ezinkulu zokuba kukhuphiswano lokwenyani. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bathathe elinye inyathelo ngakwicala lokwazisa I-Kobo Aura H2O Edition 2, ekwabizwa ngokuba yi-Kobo Aura H2O Edition 2017.
Le ncwadi intsha ye-e luphononongo lweKobo Aura H2O ebenempumelelo enkulu kwintengiso kwaye eyaqala ukukhathaza ii-echelons eziphezulu zeAmazon, ngenxa yesikrini sayo esikhulu, uyilo lwayo ngononophelo kunye nexabiso layo. Ukongeza, ikwazile ukukholisa inani elikhulu labafundi ukuba emva kokuvavanya isixhobo seKobo bazilinganise kakuhle zonke iimpawu zayo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, sivavanye i-Kobo Aura H2O Edition 2017 entsha kwaye olu luphononongo lwethu olupheleleyo.
2 Iimpawu kunye neenkcukacha
3 Uhlalutyo lwevidiyo
4 Amava ethu ngoKobo Aura H2O uHlelo 2
6 Uvavanyo lokugqibela
UKobo usoloko ebeka umdla omkhulu ekuthatheni ukhathalelo oluphezulu lwezixhobo zalo kwaye le Kobo Aura H2O Edition 2 ayikho ngaphandleNangona sele silumkisile ukuba izinto ezisetyenzisiweyo zinokushiya ungakhathali. Kwaye le ncwadi intsha yakwi-elektroniki yakhiwe ngeplastikhi emnyama ngaphambili, ekuya kuthi kuyo yonke imikhondo iphawulwe ngalo lonke ixesha sifunda, into engonwabisiyo kwaye ngamanye amaxesha inike isixhobo imbonakalo emdaka (Ungajonga kufutshane kuninzi iifoto kwinqaku kwaye uza kubona ukuba igcwele njani umkhondo nangona ndiyicoca kaninzi-ninzi). Umva ugqunywe ngohlobo lweerabha oluya kusivumela ukuba sibambe isixhobo ngokukhululeka kwaye ngaphandle kokuba kubekho ithuba elininzi lokushenxiswa okanye ukuwa phantsi.
Enye yezinto ezintle kule Kobo eReader intsha yile Iscreen esikhulu se-6.8-intshi ekuvumela ukuba ukonwabele ii-eBooks ngokungathi besifunda incwadi kwifomathi yamaphepha emveli.
Kananjalo asinakulibala malunga entsha Isiqinisekiso se-IPX68 Isixhobo esitsha seKobo esinaso kwaye esivumela kungekuphela nje ukuba simanzise incwadi yethu ye-elektroniki, kodwa nokuba siyigalele ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-2 phantsi kwamanzi kunye nemizuzu engama-60 ubuninzi. Andicacanga ncam ukuba ngubani onokufuna ukufaka incwadi ye-elektroniki phantsi kwamanzi, kuba kuya kuba nzima ukuyifunda, kodwa kulungile kakhulu ukuyimanzisa kuba asizanga sizikhathalele iincwadi echibini okanye ebhafini indlu.
Okokugqibela, sifuna ukuthetha malunga nobunzima beli Kobo Aura H2O Edition 2017, eyi-207 gram, kwaye ngokungathandabuzekiyo ibonakala ngathi igqithile kwisixhobo solu hlobo, nangona sithathela ingqalelo ukuba ayisiyi-eReader enobukhulu obuqhelekileyo, Sinokuthatha obu bunzima bungathandekiyo xa ufunda.
Apha sikubonisa ifayile ye- ezona mpawu ziphambili kunye nokucaciswa kweKobo Aura H2O Edition 2 entsha;
Imilinganiselo: 129 x 172 x 8.8 mm
Ubunzima: 207 gram
I-6.8-intshi yeeleta yokuthinta isikrini kunye nomgangatho wokuprinta we-e-ink engama-265
Izibane zangaphambili: I-ComfortLigth Pro eyanciphisa ukubonakaliswa kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka ngokufunda ngakumbi ebusuku
Ugcino lwangaphakathi: 8GB apho sinokugcina ngaphezulu kwee-eBooks ezingama-6.000
Ukunxibelelana: I-Wi-Fi 802.11 b / g / n, iMicro USB
Ibhetri: 1.500 mAh eqinisekisa ukuzimela iiveki
Iifomathi ezixhaswayo: Iifomathi zefayile ezixhaswayo ngokuthe ngqo (EPUB, EPUB14, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
Iilwimi ezikhoyo: IsiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, iSpanish, isiDatshi, isiTaliyane, isiPhuthukezi saseBrazil, isiPhuthukezi, isiJapan nesiTurkey
Ukwenza ngokwezifiso: Uhlobo lweGenius- ziindidi ezili-11 zeefonti kunye nezitayile ezingama-50
Ubungakanani befonti kunye nokuseta okubukhali
Ngaphandle kwamathandabuzo ezona zinto zibalaseleyo kwesi sixhobo seKobo sisikrini sayo esikhulu se-6,8-intshi ukuba inani elikhulu labafundi bathande kakhulu, kwaye ngelishwa azikho iinkampani ezininzi kakhulu eziye zalinga ukumilisela i-eReader ngescreen kobu bukhulu. Ukongeza, isatifikethi se-IPX68 kunye nenani elikhulu leefomathi ezihambelanayo zezinye zezinto ezinamandla esele zibekwe njengenye yeencwadi ze-elektroniki ezixabisekileyo kwinqanaba leempawu kunye nokubalulwa.
Apha ngezantsi sikubonisa uhlalutyo olupheleleyo lwevidiyo yolu hlelo lweKobo Aura H2O 2017;
Amava ethu ngoKobo Aura H2O uHlelo 2
Akuthandabuzeki Enye yezinto esizithandayo kakhulu malunga neKobo Aura H2O Edition 2 ibubungakanani bescreen sayo, esivumela ukuba sibe sezandleni zethu isixhobo esinemilinganiselo efana naleyo nayiphi na incwadi kwifomathi yamaphepha emveli. Oku kuthetha ukuba singafunda ngendlela ebhetyebhetye kwaye ngaphandle, umzekelo, kufuneka sandise ubungakanani beleta, into kuthi kuthi abo bangaboniyo kakuhle iyinkathazo yokwenene.
Ukuqhubeka nescreen kufuneka ndibonise Isisombululo esikhulu esinikezelayo, i-256ppi kwaye loo nto yenza ukuba naliphi na unobumba ubonakale ubukhali kwaye ucacile. Kule nto kufuneka kongezwe inqaku leComfortLight PRO elinciphisa ukubonakaliswa kukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, nelawulwa ngokuzenzekelayo ngokuxhomekeka kukukhanya okule ndawo sifunda kuyo. Eli nqaku linombono wokufunda ngaphambi nje kokuba ulale kwaye ukuze amehlo ethu angapheli adiniwe, njengoko kusenzeka kwezinye izixhobo zolu hlobo.
Enye into esilelayo kwisixhobo esitsha seKobo yinkxaso yeefomathi ezininzi, into ehlala ixabiswa. Ngokukodwa, sinokufaka iifayile ngezi zandiso zilandelayo; EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ kunye ne-CBR.
Ngethamsanqa, ndibenethamsanqa lokuzama iincwadi ezininzi ze-elektroniki kumaxesha akutshanje, kodwa enye yezo zinto zindishiyile eyona incasa emlonyeni wam yile Kobo Aura H2O Edition 2017, ubukhulu becala ngenxa yesikrini sayo esikhulu, kodwa nangenxa ezinye izinto ezininzi, ezishiya uyilo lwesixhobo ngasemva kude kakhulu kubunzima baso, mhlawumbi siphezulu noko.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba sithathe isigqibo sokuba singazami ukuntywilisela isixhobo emanzini, ngenxa yento enokwenzeka, nangona isuka eKobo inyanzelise iphindaphindwe ukuba siyifumana imanzi okanye singene echibini nayo kuba bekuza kubakho ungabi nangxaki. Kwa-Actualidad Gagdget siyayithanda itekhnoloji kodwa siyisebenzisa apho kufanelekileyo kwaye sikholelwa ngokunyanisekileyo ukuba i-eReader enexabiso eliphezulu ayikufanelanga kuvavanyo olungeyomfuneko phantse kuwo wonke umntu.
Le Kobo Aura H20 Edition 2 sele ithengisiwe kwihlabathi liphela emva kokuba iboniswe ngokusemthethweni kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo. Ingathengwa ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya iivenkile ezibonakalayo zeFNAC, fnac.es okanye kobo.com. Ukongeza, kwaye kunokuba kungenjalo kungenjalo, inokuthengwa kwakhonangeAmazon kwikhonkco elilandelayo.
Ngokumalunga nexabiso, asijonganga nencwadi yezoqoqosho ye-elektroniki, kodwa siyayenza Ixabiso lehlisiwe xa kuthelekiswa neemodeli zangaphambili, ukuhlala kwi-euro ye-179.99. Akukho xabiso lisezantsi kakhulu, kodwa ukuba sithelekisa umgangatho kunye namandla asinika esi sixhobo seKobo, singaphezulu kokuhlengahlengiswa.
Ukuvala olu hlalutyo asinakusilela ukwenza uvavanyo lokugqibela. Kuqala ndiyacinga le Kobo Aura H2O 2017 ayinakushiya nabani na ongakhathaliyo Kwaye ndicinga ukuba abafundi abaninzi bayayithanda, kodwa abanye abayikuthandi, hayi kuba inesiphene okanye isiphene, kodwa ngenxa yokuba baninzi abafundi abangafuniyo ukuba bafunde yonke imihla le screen.
Ukuba ndingabeka inqaku kwesi sixhobo seKobo, emva kokuyisebenzisa iintsuku ezininzi, isondele kakhulu kokuqaqambileyo, nangona ihlala kwindawo ephezulu kakhulu. Mhlawumbi ubunzima obusezantsi kunye nezinto ezahlukeneyo kulwakhiwo lwazo ngekunike esi sixhobo indawo yokuma oyifunayo. Kananjalo, ukuba kwiinguqulelo ezizayo bayilungisile ingxaki yomkhondo oshiyekileyo uphawulwe kuyo yonke imeko, iya kuthakazelelwa kakhulu.
IAmazon ilawula intengiso ye-eReader ngohlobo lwayo, kodwa le Kobo Aura H2O Edition 2017 isondele kakhulu ngandlela zonke kwizixhobo zenkampani ekhokelwa nguJeff Bezos kwaye mhlawumbi kwixa elizayo imbonakalo-mhlaba kwilizwe lokufunda kwedijithali kutshintshe kakhulu.
IKobo Aura H2O uHlelo 2
Uyilo kunye nezinto ezisetyenziselwa ukuvelisa
Ucinga ntoni ngale Kobo Aura H2O Edition 2 entsha?. Sitshele kwisithuba esibekelwe ukuphawula kule post okanye ngayo nayiphi na inethiwekhi yoluntu apho sikhona kwaye silangazelela ukuva izimvo zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Kobo Aura H2O Edition 2 okanye ukhuphiswano olukhulu lweAmazon Kindle
Ndinayo le kobo kwaye ngexabiso elibiza ukuba ndifumana isiphene esibalulekileyo kuluvo lwam, kwaye ezo zizichazi-magama ezibini ezibandakanyiweyo zonke zibhekisa kwisiNgesi. Akukwazeki ukuba isixhobo eso samkele isichazi-magama sesiFrentshi-iSpanish okanye naluphi na olunye ulwimi oludibeneyo apho isiNgesi singekho Ukuba isixhobo sithengiswa kwintengiso yamanye amazwe, kufuneka sibandakanye izixhobo ezilungiselelwe le ntengiso. Ukuba akunjalo, bayithengisa kuphela kumazwe athetha isiNgesi.
UWiko usungula izixhobo zikaJerry 2 kunye neLanga 2 zokuqaqambisa ihlobo